साउन ७ गते बिहिबार, कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – Ramailo Sandesh
साउन ७ गते बिहिबार, कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
दिन फलदायी रहेको छ । अस्वस्थ तथा तनाव महसुस गर्नु हुनेछ । थकान त अशान्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। रिसको कारण कम बिग्रन सक्छ। व्यवहारमा संयमता राख्नुहोला । तोकेको समयमा काम पुरा गर्ने प्रयास गर्नु होला। धार्मिक यात्रा हुन सक्छ। काम बिग्रने सम्भावना हुदा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु होला ।
कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । तेसैले खान पनमा बिषेस ध्यान दिनुहोला । शारीरिक तथा मानषिक रुपमा थकान अनुभव गर्नु हुनेछ । कार्यालयमा कामको भार बढ्ने हुँदा थकान अनुभव हुनेछ। यात्राको लागि समय राम्रो रहेको छैन।
शुख खुशीमा दिन बित्नेछ । बिपरित लिंगी सँग भेट हुनेछ। साथी भाइसँग रमाइलो यात्रा हुनेछ। वाहन शुख मिल्नेछ । नयाँ वस्त्र प्राप्त हुनेछ । भोजनमा मिठो खान पाइनेछ । स्वस्थ र फुर्तिलो हुनुहुने छ । उत्तम दाम्पत्य जीवनको शुख प्राप्त हुनेछ ।
दिन राम्रो बित्नेछ । घरमा रमाइलो वातावरण हुनेछ। गरेका कुनै पनि कार्यबाट शुख प्राप्त हुनेछ। घरमा परिवारका सदस्यमा खुशी छाउने छ। नोकरीमा लाभ हुनेछ। नजिकको सहकर्मी बाट लाभ हुनेछ। स्त्री मित्र संगको भेटले मन प्रशन्न हुनेछ। शत्रु सँग विजय प्राप्त हुनेछ।
दिन रमाइलोमा बित्नेछ। प्रेमी सँग भएको भेट लाभ दाएक हुनेछ। मन प्रशन्न हुनेछ। शन्तान प्राप्तिको योग बनेको छ। बिद्यार्थीको लागि राम्रो समय रहेको छ । स्त्रीमित्र बाट लाभ हुनेछ। परोपकारी कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने छ ।
शारीरिक तथा मानशिक स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । केहि समस्याको कारण चिन्ता बढ्न सक्छ। आफन्त सँग खट-पट हुनसक्छ। आमाको स्वास्थ्यको चिन्ता हुन सक्छ । अचल सम्पति तथा व्यवसायमा बिषेस ध्यान दिनुहोला। स्त्री तथा पनि बाट हानी हुनसक्छ।
दिन शुभ हुनेछ। साथि भाइ संगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। अचल सम्पतिको चर्चा बढ्नेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । धन लाभ हुनेछ । व्यापारको लागि यात्रा हुनसक्छ। नायाँ कामको थालनीको लागि उचित समय रहेकोछ । भाग्य वृद्धि हुने योग बनेकोछ। शरीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ।
दिन सामान्य फलादाही रहेको छ । व्यर्थको खर्च हुनसक्छ। घर परिवारमा झगडा हुनसक्छ। आफन्तमा खट-पट हुनसक्छ। शारीरिक समस्य हुनाले मनमा चिन्ता बढ्न सक्छ । बिद्यार्थीको लागि बिभिन्न समस्या हुनसक्छ।
धार्मिक यात्रा हुनसक्छ। गरेको कार्य सम्पन्न हुनेछ । शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ । जसको कारण मनमा खुशी छाउनेछ। घरमा मांगलिक कार्य हुनेछ । आफन्त सँग भेट हुनेछ। मन प्रशन्न हुनेछ । समाजमा मन प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
धार्मिक कार्यमा व्यस्त भइने छ । व्यवसायाम बाधा हुनसक्छ। आफन्तको प्रतिष्ठामा हानि पुग्न सक्छ। परिश्रम अनुसारको फल प्राप्त हुन नसक्दा मन दुखि हुन सक्छ ।
व्यवसाय क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । मित्रहरु संगको भेटले मन खुशी हुनेछ। साथी भाइसंग रमाइलो यात्रा हुनसक्छ। नयाँ कार्यको शुभारम्भ गर्नको लागि दिन शुभ रहेको छ । विवाहको योजना बन्न सक्छ।
दिन अत्यन्तै फलदाइ रहेको छ। कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यापारी हरुको लागि व्यापार वृद्धिको समय रहेको छ । बाबु तथा आफूभन्दा ठुला बाट लाभ हुनेछ। मान सम्मान तथा पदउन्नतिको समय रहेको छ। दिन आनन्दमय हुनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितलाई इन्द्रेणीका कृष्ण कँडेलले हस्तान्तरण गरे ६२ लाख